“Iyaga Oo Qofkii Baadhaya Ayay Haddana Midiyo La Dhacayaan…” Xildhibaan Si Wey Uga Dayriyay Dhalinyaro Khatar Ku Ah Amniga Magaalada Hargeysa – somalilandtoday.com
“Iyaga Oo Qofkii Baadhaya Ayay Haddana Midiyo La Dhacayaan…” Xildhibaan Si Wey Uga Dayriyay Dhalinyaro Khatar Ku Ah Amniga Magaalada Hargeysa
(SLT-Hargeysa)-Xildhibaan Khadar Xuseen Sahal oo ka mid ah mudanayaasha golaha guurtidda Somaliland, ayaa si wey uga dayriyay dhalinyaro kooxo kooxo ah oo xilliyada habeenkii khalkhal ku haya amniga caasimadda Somaliland.
Xildhibaanku waxa uu sheegay in wakhtiyadii hore ay dhalinyaraddu ku fooganaayeen oo kaliya qaadashadda iyo boobka Mobiladda, balse haatan ay xaaladoodu gaadhay qudh-gooyo.
Xildhibaan Khadar Xuseen Sahal, waxa uu baaq u diray ciidamadda booliska, xukuumadda Somaliland iyo walidiinta ubadkani dhalay, waxaanu sidan ka sheegey mar uu shalay warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Hargeysa.
Xildhibaan Khadar Xuseen Sahal oo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi “Waxaa jira dhalinyaro badan oo kooxo kooxo ah oo ku soo badanaya magaalada Hargeysa. Dhalinyaradaasi hawshoodu markii hore waxay ahady kaliya inta ay Moobil qof ka qaadaan in ay la cararaan. Laakiin imika waxa ay noqotay qudhgooyo, waa khaatiliin, xaafadaha qaar baa la sheegayaa inta ay toban toban isu soo raacaan iyaga oo afka soo duubtay, in ay cidkasta oo ka hor timaada ay baadhaan, iyaga oo qofkii baadhay ayay hadana midiyo la dhacayaan.”
Xildhibaan Khadar isaga oo hadalkiisa sii wata waxa uu intaasi ku daray “Waxaan u ugu baaqayaa ciidamada booliska Somaliland in arrinkaasi ay xooga saaran sidii ay wax uga qaban lahaayeen.”
“Arrintaasi haddaan wax laga qaban oo aan jeelal waaweyn iyo goobaha dhalinyaradan dhaqan celin loogu sameeyo aan loo diyaarin xaaladdu way sii fogaanaysaa, waana in la isu kaashado madax dhaqameed, boolis iyo xukuumadda taladda dalka heysa, markaa waxaan soo jeedinayaa in dhalinyaradaa ammaanka wax u dhimaysa la xanuujiyo oo tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado,” ayuu yidhi xildhibaan Khadar Xuseen Sahal.